सपनामा हामीले कपाल काटेको वा कपाल देख्दा के हुन्छ ? जान्नुहोस्! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
२० पुस २०७७, सोमबार ००:००
सपना हामी समान्यतया सबैले देख्ने गर्छौ । हामीले सपना कस्तो अवस्था अनि कुन समयमा देखेका छौँ त्यसको आधारमा पनि सपनाको फल प्राप्त हुने गर्छ ।
यदि हामीले दिउँसो त्यहि कुरा सोचेका छौ तर बेलुका त्यही सपना आयो भने त्यसको कुनै महत्व हुदैँन तर हामीले सोच्दै नसोचको सपना आउछँ भने त्यसले समयअनुसार फल दिने संकेत गर्छ ।
आज हामीले कपालसम्वन्धी कुन सपना देख्दा कस्तो फल मिल्छ भन्ने विषमा तपाई सामु चर्चा गर्न गइरहेका छौ ।
–हामीले कपाल देखियो आफ्नो कपाल मात्र देखियो जस्तो आफ्नो कपाल छ विपनामा पनि त्यस्तै देखियो भने त्यसलाई नराम्रो मानिदैनन् धनलाभ हुन सक्ने संकेत दिएको हुन्छ ।
–अरुको कपाल लामो भएको देख्नु भनेको खर्च बढ्न सक्ने अथवा कसैबाट ऋणलिएर आफ्नो काम बनाउन सक्ने भन्ने अर्थ लाग्छ ।
–सपनामा कपाल काटेको देख्नु यो सपना राम्रो मानिन्छ । यदि कहिल ऋणमा आफू फसीएको छ अथवा मुद्दामामला आदीमा आफू फसिएको छ भने यस्तो सपना देखियो भने अब त्यो ऋण आफूले तिर्न सकिन्छ र मुद्दामामलामा आफ्नो जीत हुन्छ है भन्ने संकेत गर्छछ । यदि कहिन कहि आफूले ऋण तिर्नको लागि पैसा माग्नु भएको छ भने पनि त्यो मिल्छ है भन्ने संकेत दिएको हुन्छ र आफूलाई लाभ नै हुन्छ भन्ने हुन्छ । यदि सपनाको फल हजुरहरुलाई सुल्टो हुन्छ भने यी कुराहरु हुन्छ यदि उल्टो हुन्छ भने नराम्रो हुन पनि सक्छ त्यो आफूले विचार गर्ने कुुरा हो ।
–कपाल लामो भएर बढेको सपना देख्यो भने आफ्नो कपाल लाम्रो भएर बढेको देख्दा प्राय यसलाई नराम्रो मानिदैन । अरुको कपाल लामो भएको देखियो भने कहिन कहि गएर नराम्रो ऋण, खर्च हुन सक्छ भन्ने संकेत पनि गर्छ ।
–कपाल कोरेको बारम्बार सपनामा देख्नुहुन्छ भने अब ऋणबाट मुक्त भइदै छ भन्ने यसले संकेत गरेको हुन्छ । अनि यदि कोही अविवाहित हुनुन्छ भने प्रेममा पर्न सक्ने भन्ने संकेत पनि गर्छ । जस्तै स्त्रीलाई पुरुष लाभ र पुरुषलाई स्त्री लाभ हुनसक्ने संभावना हुन्छ । अथवा यदि कहि विवाहको कुरा चल्दै छ भने विवाह हुन सक्छ है भन्ने पनि संकेत गरेको हुन्छ । सन्तान प्राप्ती, पुत्रलाभ हुने सम्भावना हुन्छ ।
–आफ्नो कपला झरेको सपना देख्नु भनेको चाय त्यो काटेर झरेको होस् या कोरेर झरेको होस् कुनै न कुनै माध्यमबाट कपाल झरेको देख्नु राम्रो हो । यसले समस्याबाट छुटकरा मिल्छ है भन्ने संकेत गर्छ । र ऋणबाट मुक्त भइन्छ भने अर्थ राख्छ ।
–कपाल मिलाएको सपना देख्दा यात्रा तथा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्ने संकेत गरेको हुन्छ । कतैजाने योजना छ भने यो पुरा हुन्छ ।
–कपाल नुहाएको देख्दा कहिलन कहिबाट लाभ साथै स्वास्थ्य लाभ मानिन्छ ।
–कपाल काट्नको लागि कैची देख्नु भयो भने यो नराम्रो मानिन्छ । यसले झगडाको संकेत गर्छ ।
–आफूले सेतो कपाल देख्दा राम्रो मानिन्छ । यसले आयुलामो हुने संकेत गर्छ । यदि कोही रोगी हुनुन्थ्यो भने रोगबाट कहिन कहि छुटकरा मिल्न सक्छ भन्ने हुन्छ ।
–आफ्नो कालो कपाल देख्दा पनि राम्रो मान्य गरिन्छ । यस सपनाले पनि सफलताको प्रतिक मान्ने गरिन्छ ।
–आफूले अरुकोे कपाल काटेको सपना देखमा कपाल काटीने व्यक्तिका लागि राम्रो हुने गर्छ तर कपाल काट्ने व्यक्तिका लागि नराम्रो हो । जसको कपाल काट्दै हुनुन्छ त्यो व्यक्तिको लागि आथिक लाभको संकेत गर्छ तर कपाल काट्ने व्यक्तिलाई आथीक हानीको संकेत गर्छ ।
–दारी देख्नु राम्रो मान्छि । आर्थीक लाभको संकेत मानिन्छ ।
–कपाल भरेर तालु भएको देख्नु भनेको सामान्यरुपमा चिन्ता बढ्छ तर आर्थीक समस्या भने हल हुर्दैँ जान्छ भन्ने हो । थोरै वाणीमाथी विचार गर्नुहोला भन्ने संकेत गर्छ । बोल्दा विचार पुर्याएर मात्र बोल्नुहोला
प्रकाशित मिति: Jan 4, 2021
ज्याेतिष डा. उत्तम उपाध्याय न्यौपानेको ‘के भन्छन् तपाईंका कुण्डलीका ग्रहले’ पुस्तक सार्वजनिक
अधिकांश नेपाली आफ्नो धर्म र संस्कृतिप्रति निकै सचेत छन् । परम्परादेखिको धर्म संस्कृतिलाई आफ्नो जीवनशैली
परिवारका सदस्यको फोटोहरू कुन दिशामा राख्दा घरमा आउँछ खुशीयाली जान्नुहोस् !
हामी प्रायः सम्झनाहरु त ताजा राख्नको लागि घरमा फोटो फ्रेम राख्ने गछौँ। घरका सदस्यहरूको फोटो